Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Russia maliteghachiri ụgbọ elu Qatar, India, Vietnam na Finland
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Finland na -agbasa ozi ọma • India na -agbasa ozi ọma • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Ndị ụgbọ elu Russia bidoro ụgbọ elu ọzọ na mba anọ ọzọ
Ndị ọrụ gọọmentị Russia kwupụtara na malite na Jenụwarị 27, Russia ga-amaliteghachi njem ụgbọ elu azụmahịa na Qatar, India, Vietnam na Finland.
Nke a bụ ọkwa sitere na Isi Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ iji buso mgbasa Covid-19 na-eso nzukọ ya na osote Mịnịsta Ala Russia Tatyana Golikova.
Nkwupụta gọọmentị gọọmentị Russia kwuru, sị: “Dabere na nsonaazụ mkparịta ụka ahụ na iburu n'uche ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa na mba ọ bụla, isi ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịmaliteghachi na ụgbọ elu mba ọzọ site na Jenụwarị 27, 2021 na ndị na-esonụ: Vietnam (Moscow -Hanoi, ugboro abụọ n’izu ụka); India (Moscow-Delhi, ugboro abụọ n’izu ụka); Finland (Moscow-Helsinki, ugboro abụọ n’izu ụka na St. Petersburg-Helsinki, ugboro abụọ n’izu ụka); Qatar (Moscow-Doha, ugboro atọ n’izu ụka) ”.